Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay damaca Farmaajo iyo Nisa | dayniiile.com
Home WARKII Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay damaca Farmaajo iyo Nisa
Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay damaca Farmaajo iyo Nisa
Sida aan xog sugan ku helnay farriinta lagu daabacay bogga Twitter -ka ee NISA waxaa amarkeeda bixiyey madaxweynaha xilkiisa dhamaaday. Waa isku day lagu carqaladaynayo doorashada dalka, gacantana dalka loogu gelinayo argagexisada Alshabaab. Markii lagu guul darraystay muddo kororsi, laaluush, kala qaybin, xil ballanqaadis, ayaa la isugu hanjabayaa argagexisada.
Waxaan u bahaan nahay in aan dalka ka ilaashanno argagexisada magaca siyaasadeed iyo midda kan diineed huwan oo ay dantoodu isku tolantay.
NISA halkii ay ka ilaalin lahayd amniga dalka, iyadii ayey halistii amniga ka imaanaysaa. Raysalwasaare Rooble iyo xukuumaddu waa in ay isbedel degdeg ku sameeyaan hoggaanka hay’adaha amniga, waana in la joojiyaa dabaaldegga ajandaha gurracan lagu hoos abaabulayo ee 12ka April, maadaama aan 3 sano ee ugu danbaysay aan la qaban.
Xukuumad, maamul, shacab, siyaasi iyo waxgaradba waa in meel uga soo wada jeesannaa halista uu dalka wajahayo oo xilligan adag badbaadinta dalka u wada istaagnaa, gacana iska qabanaa kuwo doonayaa in ay dumiyaan mirihii Nabada iyo dawlad dhiska dalkeena.
Next articleMusharax Daahir Geelle ayaa sidaan qoray
, Russia intensifies its attacks in Donbass, while Poland’s president hails...
“Madaxweyne hore mucaarad ma noqdo” Cabdiraxmaan Cabdishakuu ayaa xalay yiri hadalkan